Garoonka Real Madrid Ee Estadio Santiago Bernabeu Oo Cisbitaal Isku Badalay Iyo Madrid Oo War Ka Soo Saartay. - Gool24.Net
Garoonka Real Madrid Ee Estadio Santiago Bernabeu Oo Cisbitaal Isku Badalay Iyo Madrid Oo War Ka Soo Saartay.
Kooxda Real Madrid ayaa si wayn uga qayb qaadanaysa samata bixinta dalka reer Spain ee cudurka coronavirus waxayna garoonkooda Estadio Santiago Bernabeu u badaleen cisbitaal lagula tacaalayo dhibaatada uu keenay coronavirus.
Ciyaartoyda iyo kooxaha La Liga ayaa qayb wayn ka ah dadaalka lagu doonayo in lagu joojiyo saamaynta cudurka coronavirus iyaga oo dhaqaale badan ku bixiyay laakiin Real Madrid ayaa garoonkeeda Estadio Santiago Bernabeu u furtay shaqaalaha caafimaadka ee qaranka Spain.
Real Madrid ayaa garoonkeeda Estadio Santiago Bernabeu ka dhigtay goob lagu soo rogo daawooyinka iyo walxaha caafimaad ee ay shirkadaha iyo ganacsatadu ugu deeqaan shaqaalaha caafimaadka Spain halkaas oo ay ku kaydinayaan isla markaana laga qaadayo marka loo baahdo.
War rasmi ah oo ay Real Madrid soo saartay ayaa lagu yidhi: ” Santiago Bernabeu waxa uu bixin doonaa goobo lagu kaydiyo qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay ee deeqda ah ee lagula dagaalamayo Coronavirus”.
“Dhamaan agabka la kaydiyay waxaa loo sii gudbin doonaa maamulada caafimaadka Spain iyada oo la raacayo xukunka dawlada Spain, sidaa daraadeed khayraadka caafimaad ee deg dega ah ee lagama maarmaanka ah si loo gaadhsiiyo sida ugu fiican iyo qaabka ugu sahlan”.
Maanta oo khamiis ahayd waxaa hoos u dhacday geerida dadka u dhimanayay coronavirus ee dalka Spain iyada oo la shaaciyay in 24 kii saacadood ee ugu danbeeyay ay dhinteen 655 qof halka 24kii saacadood ee ka horeeyay ay dhinteen 738 qof.
Guud ahaan waxaa dalka Spain xanuunka coronavirus u geeriyooday in ka badan 3434 qof iyada oo wali la filayo in dhimashadu ay sii socon doonto.
Real Madrid ayaa sidoo kale shaacisay in ay caawin doonto shaqaalaha caafimaadka si loo gaadhsiiyo adeega caafimaad ee garoonkeeda lagu kaydinayo inta lagu jiro dagaalka ka dhanka ah coronavirus.
Ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda Real Madrid ayaa si la mid ah kooxaha kale ee kubbada cagta waxay dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyay ku soo jireen go’doomin guri oo ay kaga taxadarayaan coronavirus.